Taaliye Saadaq John oo is hortaagay fadhigii Baarlamanka | KEYDMEDIA ONLINE
UPDATE: Taliyaha Ciidanka Booliska Gobolka Benaadir Saadaq John ayaa laga qaaday xilkii kaddib markii uu shaaciyay in uu is hor taagay fadhigii Golaha Shacabka BJFS ee maanta
MUQDISHO, Soomaaliya - Taliyaha Ciidanka Booliska Gobolka Benaadir Saadaq John ayaa si buuxda u caddeeyay inuu is hor taagay fadhigii maanta ee Golaha Shacabka BJFS ay ku lahaayeen xarunta Villa Hargeysa ee magaalada Muqdisho.
Taliye Saadaq oo kasoo hor muuqday warbaahinta ayaa si kulul uga hadlay xaaladda dalka, waxa uuna caddeeyay in uusan raalli ka noqon karin in maanta dib loogu laabto xaalad adag oo colaadeed, waxa uu farriin u diray Guddoonka Golaha Shacabka ee ku mashquulsan inuu sameysto muddo kororsi, waxa uuna ku yiri "Doorasho ayaad ku imaateene haku fakarina in aad muddo kororsi sameysaan, aada deegaan doorashadiinii oo doorasho gala!"
Saadaq John oo ah taliyihii fuliyay weerarkii hoyga Cabdiraxmaan Cabdishakuur islamarkaana lagu xaman jiray inuu fuliyo awaamiirta madaxweyne Farmaajo, laguna tirin jiray saraakiisha daacadda u ah Farmaajo ayaa qaatay go'aan aan laga filaneyn, waxa uuna bixiyay amar ah in la baajiyo kulanka muddo kororsiga ah!
Farriin toos ah ayuu u diray Ra'iisul Wasaaraha waqtigiisu dhammaaday ee Rooble, waxa uuna u sheegay inuu fadhiga ka kaco oo uu dib u billaabo wada-hadalladii Teendhada Afisiyooni.
Sidaas si lamid ahna wuxuu ula hadlay Wasiir Dubbe waxa uuna yiri "Wasiiroow waxaan ku leeyahay dadkaaga dhinac ka raac, waxdambe oo lagu soo dhiibay ha akhriyin. Waxaad akhridaa wixii dalka dani ugu jirto"
Aas aaskii kooxda Baraha Bulshada - CBB
Warar 19 October 2021 19:52
Waxa ay durbadiiba u qoreen gunno yar, taasoo ay rumeysnayeen Farmaajo iyo Fahad in ay ku qiima dili karaan siyaasiyiinti kursiga uga horeysay ee ka mudnaa ixtiraamka.
Dhallinyarada far-shaxanka oo ku soo badanaya Soomaaliya
Warar 19 October 2021 19:00
Haweenku ma heli karaan qoondadooda siyaasadeed?
Warar 19 October 2021 16:17
Warar 19 October 2021 15:55
Xeer Ilaaliyaha Guud, wuxuu ku boorriyay ciidamada badda ee Soomaaliya inay soo xiraan maraakiibta shisheeye ee sida sharci darrada ah uga kalluumeysta xeebaha Soomaaliya.